Ndi backlink indexer tools still worth using now?
Ị ka na-eche ma ngwaọrụ ndị na-edekọ aha azụ hà kwesịrị iji ugbu a, ma ọ bụ? Azịza dị mfe - ee, ha bụ. Ma enwere ọtụtụ ihe mere ị ga - eji kwenye na - na - agbazi ndepụta kwesịrị ekwesị kwesịrị ịbụ MUST maka weebụsaịtị ọ bụla. Dịkarịa ala n'ihi na a na-edekarị ha na White-Hat SEO, ha bụ n'ezie ndị na-adịghị akwụ ụgwọ. Ya mere, ka anyị chee ya ihu - ọrụ ndị na-edebanye aha na redist nọgidere na-arụ ọrụ mbụ na 2017, na-atụ anya site ọdụ ọdụm nke ndị ọkachamara SEO ka ha na-edebe mkpa ha n'ọdịnihu - certificates of achievement templates. Nke a bụ ihe dị n'okpuru ebe m ga-enwe nkowa mkpirikpi nke atụmatụ ndị kachasị mma maka amaokwu azụmahịa, mpaghara mgbasaozi, netwọk na-arụ ọrụ, na echiche nke "SEO ọjọọ" na-agba ume ka onye na-edebanye aha ugbu a na-arụ ọrụ maka ọbụna karịa.
Ederede Business Business
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, a gaghị echefu amaokwu azụmahịa nke obodo, karịsịa banyere ọtụtụ n'ime ọrụ mpaghara mpaghara ma ọ bụ obere azụmahịa. Naanị n'ihi na ọbụna ndị nkwado ndabere na ikike dị elu na-enweghị ike ịbanye na Google na ọkwa dị mkpirikpi. Ntak-a? Nsogbu bụ na oke ọdụm nke nkọwa ndị metụtara ọdịnaya na-ejikarị eme ihe ugboro ugboro. Gini mere i kwesighi ka i jiri ezi uche mee ihe karia ndi na-ama gi nke oma ma buru isi? Ya mere, a na-eji ihe ntanetịime ederede na-aba uru ma ọ dịkarịa ala n'ihi na ebe nrụọrụ weebụ gị chọrọ ka ederede aha ọzọ, n'enweghị onye ọ bụla n'ime ha na-ahụghị site na engines ọchụchọ.
Ihe bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njikọ ọpụpụ niile site na mbipute akụkọ bụ naanị ntinye okwu, ma ọ bụ n'ezie noindex. Ntak-a? Nanị n'ihi na engines dị mkpa dịka Google n'onwe ya maara na onye ọ bụla nwere ike ịkwụ ụgwọ maka nkwụnye ọkụ nke pịa mbipụta. N'ihi ya, ị nwere ike ịnweta otu narị azụlinks site na mbipụta akụkọ na mgbasa ozi dị elu ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ. Ka o sina dị, ọ bụ naanị otu ma ọ bụ abụọ n'ime ha ka a ga-ewere na ndepụta Google nke SERPs. Ma ebe a bụ ihe ngwọta gị - ihe nrite ọ bụla maka ndị azụlinks ndị ahụ e depụtara na ha nwere ike ịka mma ma ọ bụrụ na ejiri azụlink indexer tools like Instant Links Indexer, yana Backlinks Indexer. Agbalịrị m ha abụọ, n'ihi ya ọ bụ naanị gị ka ị ga-ahọrọ onye ị ga-ahọrọ.
N'ụzọ dị mwute, ọ nwere ike iwepụta oge dị ukwuu maka Google na ndị ọzọ search engines iji chọpụta ọ bụla backlinks na-adịbeghị anya kere ọbụna na ndị na-eduga netwọk, dị ka Tumblr, Blogger, wdg.Ọ bụ ya mere m ji kwenye na ọrụ redirect indexer na-adị mma. A sị ka e kwuwe, ahịa ahịa ahụ bara uru iji nweta ihe ndị ahụ e depụtara aha kwesịrị ịbụ otu n'ime ihe ndị kachasị amasị gị, nri?
Ọ bụ ọnọdụ dịkarịsịrị mgbe otu onye na-asọmpi na-enyocha ebe nrụọrụ weebụ niile nke onye iro ya nke ọma. Echere m na onye nwere ike iji ihe odide gị pụrụ iche na-ebipụta ha dị ka ihe na-eme ka ibe weebụ jupụtara na ebe ọzọ nwere PageRank dị elu, ma ọ bụ ikike ngalaba. N'ụzọ dị otú ahụ, ọ nwere ike iyi na ebe nrụọrụ weebụ gị na-egosipụta ọdịnaya niile nke ụlọ akwụkwọ, kama ịbụ òtù ahụ mebiri emebi n'ezie. Ọ bụ ya mere na ị ga-aka mma mgbe niile ka ibe gị niile na-edepụta ngwa ngwa karịa ụmụ nwoke na-enweghị ntụpọ na-eme dịka copycats naanị iji zụrụ akụkụ nke ịrụsi ọrụ ike gị. N'ikpeazụ, a ga-enwe mmetụta site na "SEO ọjọọ" kwesịrị ịbụ ihe ikpeazụ na-ekwenye ekwenye iji kwuo ya ọzọ - na-elekọta ilekọta usoro kwesịrị ekwesị nke backlink indexer mgbalị ka a MUST maka website ọ bụla.